Gamaaggama Hojii Muummmicha Ministeera Itiyoophiyaa Kan Baatii Tokko – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioGamaaggama Hojii Muummmicha Ministeera Itiyoophiyaa Kan Baatii Tokko
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—–Baatii tokko dura gara aangoo mootummaa ol aanaatti kan dhufan sochiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiyi Ahimed itti dhiyeenyaan hordofamuu itti fufaniiru.Dr. Abiyi gara aangoo mootummaa sadarkaa ol aanaa kanatti kan dhufan ennaa biyyattiin muddiinsa keessa jirtutti.
Kanneen abdii irratti gatan hedduun bal’ina rakkoo jiruu irraa ka’uu dhaan jijjiirama eegu.
Kanaaf kanneen abdii irratti gatan, gara itti gaafatama kanaatti dhfuu isaaniif ilaalcha gaarii kanneen qaban lammiiwwan Itiyoopiyaa qaama hawaasa adda addaa yeroo mara yaada kennan qabu.
Gama kanaan sochii ji’a tokkoo kan muummicha ministeerichaa akkamitti akka gabaaggaman ilaalchisuun Iskinder hanga tokko dubbisee jira.
Dura taa’aan paartii semaayaawii obbo Yeshiiwaas Asaffaa akkas jedhu.
Haasawwan isaan dhageessisan fi daawwannaan isaan bakka adda addaati geggeessan gaarii dha. Kana irraa komee hin qabnu. Garuu gaaffiin ariifachiisaan jiru dirqisiisaa waan ta’eef jecha murtiiwwan ariifachisaa, ifaa fi murannoo gaafatan itti hin buune.
Sochiin kun uummata dhaqqabuufii jedhama. Garuu labsiin yeroo muddamaa yoo ka’e, asuma Finfinnee taa’anii dhaqqabuun ni danda’ama.
tokko tokkoon utuu hin taane hidhamtoota siyaasaa mara hiikuu, gaazexeessonnii fi namoonni siyaasaa beekamoon haa hiikamanuu malee, miseensonni semaayawii, kan paartii tokkuummaa fi kan MEAD amma iyyuu hidhamanii jidru.
Kanaaf sochii hojiitti hiikuu ilaalchisee hedduutu hafa. Haa ta’u malee haasaawwanii fi mariiwwan geggeessaman immoo abdachiisoo dha jechanii dubbachuun ni danda’ama.
Muummichi ministeerichaa naannolee adda addaatti argamuu dhaan bakka buutota hawaasaa waliin mari’achuun gaarii dha kan jedhan itti aanaa dura taa’aan paartii Medrek profeeser Beyyenee Peexroosiis dhimmootiin ariifachiisoo ta’an kaanis ni ilaalu jedhanii abdatu.
Miseensi paarlaamaa duraanii fi itti aanaa prezidaantiin Pan Afriikaa paarlaamaa Dr. Ashebbir W/Giyoorgis muummicha ministeeraa kana miseensummaa parlaamaa ta’uu dabalatee isaan beeku.
Yeroo mara nama waa dubbisu. Qophaa’anii dhufu. Sadarkaa kanattin isaan beeka. Gama beekumsaa rakkoo tokko iyyuu hin qaban.
Garuu rakkoo biyyattii attamiin irra aanu, qormaata guddaa dha yaaddoo jedhun qaban ture. Dhugumatti erga aangootti dhufanii qabee dursa kan kennaniif uummaticha tasgabbeessuu, gara tokkummaatti fiduu ture jedhan.
Ilmaan Oromoo Kan taatan Hundi Dhaamsa Kana Waliif Daddabarsa; Irrattis Hojjedhaa!!
Mootummaan naannoo Oromiyaa Namootni kudhan kadhan qeerroo dabalatee aanaalee